မောင်စေတနာ: English စာနှင့် ဆက်စပ်၍
ဟ...ကိုယ့်ဆရာက ဒီတခါတော့ ဟုတ်လှချည်လား။။။ ဘေဘီလုံးကို ဘယ်လိုသုံးနေသလဲဗျ။ crack လုပ်ပြီးသုံးတာလား..အဲဒါဆိုရင် မျှပါလား..ဟီးးးခုပေးတဲ့ဟာလည်း ယူသွားပြီး..ကျေးဇူးပဲ။
9:23 AM, January 17, 2010
babylon ရော။ Wxphdict ရော မိမိဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။း)
2:28 AM, January 18, 2010
Aung pwint said...
Very Good , Thank you So much,
ကိုစေတနာဆီကရတဲ. software တွေက အသုံးဝင်လှပါတယ်။ အခုလိုဖြန်ယဖြူးပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်နောင်မှာလည်း ဆက်လက် ဒါနပြုနိုင်ပါစေဗျာ။
speaking က .English font မပေါ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ချိန်းတဲ့နေရာလဲမတွေ့ပါ ကူညီပါအုန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
10:15 PM, January 22, 2010
ဆရာ ရောက်တုန်း မသွားတရ် ခင်ဗျ၊၊
11:49 PM, February 08, 2010
thz brother....but my babylon is expire now..ples teach me how to do!!!!!
Please can you tell me how to get babylon crack file?